Football Khabar » सर्वाधिक गोलकर्ता दौड : स्वारेज पहिलो स्थानमा चढे, यस्तो छ ताजा अवस्था
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा जारी सिजन २०२०–२१ अन्तर्गत नयाँ वर्ष २०२१ को पहिलो चरणका खेल सकिएका छन् । लिगमा हालको स्थितिमा केही क्लबले १७औं साताका खेल खेलिसक्दा केहीले १५औं र १६औं साताका खेल खेलेका छन् । लिगको सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
हाल पहिलो नम्बरमा समान ९–९ गोलसहित ३ जना खेलाडी रहेका छन् । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा ८ गोल र तेस्रो स्थानमा ७ गोल भएका खेलाडी छन् । एथ्लेटिको मड्रिडका फरवार्ड लुइस स्वारेज गत राति अलाभेसविरुद्ध गरेको १ गोलसँगै लिगको सर्वाधिक गोलमा अघि बढेका छन् । उनीसहित सेल्टा भिगोका इयागो आसपास र भिल्लारियलका जेरार्ड मोरेनोको पनि समान ९–९ गोल छ ।
यो सिजन लयमा नरहेका बार्सिलोनाका मेस्सीले हालसम्म ७ गोल मात्रै गरेका छन् । गोल संख्या हेर्दा मेस्सी मात्रै २ गोलले पछि छन् । मेस्सीले यो सिजन लिगका १६ मध्ये १५ खेल खेल खेलिसकेका छन् । यस्तो छ ला लिगामा सर्वाधिक गोलकर्ताको ताजा सूची:
१. लुइस स्वारेज – ९ गोल (१२ खेल)
२. इगायो आसपास – ९ गोल (१७ खेल)
३. जेरार्ड मोरेनो – ९ गोल (१५ खेल)
४. करिम बेन्जेमा – ८ गोल (१५ खेल)
५. लिओनल मेस्सी – ७ गोल (१५ खेल)
प्रकाशित मिति २० पुष २०७७, सोमबार २०:४७